Haragele waa wiil dhalinyaro ah oo soomaali ah oo yimid Germany sanadkii 2016. Waxaa lagu soo barbaaray tuulo ku taal baadiyaha, wuxuu ku noolaa nolol wanaagsan ilaa dagaalkii sokeeye wax walbo iska badaleen. Si dhakhso ah, asxaabtiisa aya ka dhaadhiciyay inu aado Yurub iyagoo raadinaya nabadgelyo iyo mustaqbal wanaagsan. Waxaa loo sheegay safarku inuu fududaan doono, laakiin markii uu bilaabay, wuxuu gartay inuu tahriibinayo - oo uu sidaas yahay maxbuus. Si loo noqdo looma helin.
“Markaad gaarto Itoobiya, waxaad bilaabeysaa inaad garato in safarka uu yahay qalad, laakiin dib uma noqon kartid. Isla markii aad ka tagtid wadankaaga, waa lagu iibinayaa. Adiguba waxaad tahay hantida tahriibiyaasha.
Safarkiisa wuxuu ku marayay dalalka Itoobiya, Suudaan iyo Liibiya qaatay saddex sano Isaga iyo ragii la socdayba waxaa loo haystay sidii adoomo waxaana loo iibiyey sidii xoolaha oo kale suuq. Si xun ayaa loola dhaqmay; wuxuu arkay dad loo dilay "danbi" weydiisashada biyo.
“Ganacsadayaashani waa kuwa bini-aadamnimo; naxariis midna kuma jiro. Ma tirin karo inta jeer ee la i garaacay. Waxaa la igu xidhay baabuur intii ay wadada maraysay si xunna u dhaawacmay. Taasi waa sida ay ahayd. ”
Lugtiisii ugu dambeysay ee safarkiisa - oo ka sii gudbay badda Mediterranean - waxay ahayd dhacdo kale oo naxdin leh. Doontii uu ku jirayna way biyo qaadatay oo aan xasilloonayn. Waxay ahayd inay ku noqoto xeebta Liibiya. Dhanka kale, dadku waxay argagaxeen oo is riix riixayeen.
“Waxay ahayd qof walba naftooda. Waxa ugu dhibka badan ee aan madaxa iga saari karin waa oohinta haweenka iyo carruurta oo laga tagay si ay u dhintaan.”
Khibraddan bilowga ah ka dib, Hargeele waxay sameysay dhowr isku day oo dheeraad ah si looga gudbo. Wuxuu go’aansaday inuu gaaro Yurub. Wuxuu goobjoog ka ahaa dad kale oo isla xaaladaas ah oo ka tanaasulay isku dayga iyo rabitaankooda nololeed. Hargele wuxuu ugu dambeyntii gaadhay Yurub laakiin wuxuu ka digayaa waddammada iyo dadka kale ee Afrika: yaan lagu khiyaanayn ballamaha nolol ka wanaagsan Yurub. Safarka Liibiya ku yimid waa mid khatar ah oo dilaa ah. Laba jeer ka fikir — ka dibna ka fikir mar kale.
“Waxay iibsadaan jawaanno isla markaana sawirro wanaagsan qaata; Waxay ku xidhaan warbaahinta bulshada waxayna dadka u sheegaan in nolosha halkan ay tahay mid fantastik ah. Marka, qurbo-joogtu waxay door weyn ka ciyaaraan go'aanka ay dadku qaataan. Dadka Afrika waxay arkaan sawiradan oo waxay moodayaan inay nolosha ka sameeyeen. Qofka saboolka ah ee ay la koreen wuxuu ka dhigay nolosha, marka waxay go’aansadeen inay u safraan safarka cabsida leh ee Yurub. ”